Global Voices teny Malagasy » Namelona Ny Fifandirana Taloha Nisy Teo Amin’ny Roa Tonta Ny Fanesorana An’i Japana Tanatin’ny Sarintanin’ny Lalao Olaimpikan’i Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Oktobra 2017 5:04 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fanatanjahantena, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Sary televiziona nalaina tao amin'ny tranonkalan'ny Komity Mpikarakara PyeongChang . Famaritana (farany havanana): “Fa nahoana i Japana no nesorina tamin'ny sarintany tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Olaimpika PikeongChang 201 8?”. Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube ofisialin'ny ANN .
Tamin'ny Alarobia 27 septambra 2017, voalaza fa nanamarika ny fanesorana ny vondronosy Japoney tao anaty sarintany nampidirin'ny komity mpikarakara ny Lalao Olaimpika Ririnina 2018 PyeongChang ny Sampan'ny Fanatanjahantena Japana,  izay manohana ny fandaharan'asan'ny atleta amin'ny Olaimpika ao Japana. Efa nanao fitarainana tamin'ny alàlan'ny masoivoho Koreana Tatsimo tao Tokyo izy ireo, araka ny filazan'ny Associated Press .
Satria hotontosaina ao Korea Atsimo, mpifanolo-bodirindrina aminy, amin'ny volana Febroary 2018 ny Olaimpika Ririnina , dia tsikaritra ihany ny fanesorana an'i Japana tamin'ny sarintany.
Raha nanazava ny komity mpikarakara Pyeongchang, dia nanazava fa ny fanesorana an'i Japana tao amin'ny sarintany dia “fahadisoana tsotra” nateraky ny fanovana tao amin'ny tahirin–tsary raha nanavao ny tranonkalan'ny Olaimpika tamin'ny volana Febroary ireo mpikarakara, niparitaka be tao Japana izany hadalana izany, niteraka fitantarana tamin'ny fahitalavitra  sy tenirohy tao amin'ny Twitter, #PyeongChang2018HomePage  (‘#平昌五輪HP’).
Na dia efa nahitsy haingana aza ny sarintany, dia tsy nanakana ireo fahatezerana an-tserasera tsy hisisika ao amin'ny media sosialy izany. Manuronald , mpikambana ao amin'ny Naver Matome , tranonkala fibilaogina antserasera, nanangona sioka sasantsasany tao anaty lahatsoratra  izay efa nisy nijery in-250.000. Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra nangonin'i Manuronald dia nanao fiteny masiaka raha fahadisoana tsotra fotsiny ny fanadinoina an'i Japana.
Ny fanesorana an'i Japana amin'ny sarintany dia nampifantoka indray ihany koa ny aterineto Japoney mikasika ny fifandirana roa hatry ny ela nifanaovan'i Japana sy Korea Atsimo, ny fanomezana anarana sy ny tompony izay antsoin'i Japana hoe nosy Takeshima sy antsoin'i Korea Atsimo hoe Dokdo , miorina ao anaty rano eo anelanelan'i Japana sy Korea Atsimo.
Misy ihany koa ny fifandirana hafa ankehitriny  eo amin'i Japana sy Korea Atsimo mikasika izay tokony hiantsoana ny anaran'ny rano, izay antsoina matetika hoe Ranomasin'i Japana. Mihizingizina kosa i Korea Atsimo fa tokony antsoina hoe ‘Ranomasina Atsinanana’ izy io.
Amin'izao fotoana izao, noho i Japana nampidirina indray tao anatin'ny sarintany, nijanona ny adihevitra, saingy mbola manohy mitazona alahelo sy matetika fankahalana  mivantana an'i Korea Atsimo ireo mpiserasera Japoney sasany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/13/108024/
 PyeongChang : https://www.pyeongchang2018.com/en/organizing-committee-president-ceo
 fantsona Youtube ofisialin'ny ANN: https://youtu.be/t_aE3-QrUSI
 voalaza : https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/27/national/pyeongchang-olympic-games-organizers-fix-website-map-missing-japan/#.WdEXyWhSxhE
 Sampan'ny Fanatanjahantena Japana,: http://www.mext.go.jp/sports/en/b_menu/policy/compss/index.htm
 Olaimpika Ririnina: https://www.olympic.org/pyeongchang-2018
 fifandirana hafa ankehitriny: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/22/national/politics-diplomacy/south-korea-video-renaming-sea-japan-fuels-tension/#.WdFPQmhSxhE
 Livedoor : http://news.livedoor.com/article/detail/13669705/